Indlu ebomvu, igadi eluhlaza, isibhakabhaka esiluhlaza = uxolo noxolo! - I-Airbnb
Indlu ebomvu, igadi eluhlaza, isibhakabhaka esiluhlaza = uxolo noxolo!
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguMerete
Indlu yam encinci ebomvu ukusuka ngo-1875 kunye negadi yam ebiyelweyo yenzelwe ukuzola. Nokuba uwedwa, isibini okanye usapho oluncinci, uya kuziva uxolo kunye nendalo esele ikwintendelezo. Ikhwelo lentaka kunye nomoya omtsha. Akukho bamelwane kunye neembono ezintle zamasimi kunye nabemi bawo. Ihlathi elincinci elikufutshane kunye neelwandle ezimnandi kuphela i-15 min. qhuba ukusuka apha. Inja entle yamkelekile. Ufumana igumbi lokuhlala, ikhitshi, igumbi lokuhlambela, indawo yokugcina izinto, igumbi eliluncedo kunye negumbi lokulala ukongeza kwi-650 m2 yegadi entle kunye negadi eluhlaza (enendawo yomlilo, i-hammock kunye neentyatyambo ezininzi; o)
Indlu ivela kwi-1875, ngoko umphefumlo kukho ininzi. Kokubini ngaphakathi nangaphandle, kukho indawo yokucamngca, incwadi elungileyo okanye umdlalo webhodi. Egadini kukho iindawo zokuhlala ezipholileyo ezahlukeneyo, kwaye ndibonelele ngeengubo kunye nezibane zangaphandle ukuze uhlale ngaphandle ubusuku bonke. Mhlawumbi ukujonga iinkwenkwezi njengoko kungekho okunye ukukhanya okuphazamisayo. Ukuba kupholile, indlu inezitovu ezi-2 ezilungileyo zeenkuni kunye neenkuni ezininzi zokubasa. I-TV kwigumbi lokuhlala kunye negumbi lokulala ngokufikelela kwiphakheji yendawo yeCanal Digital.
Ngokuphantse kungabikho itrafikhi kunye nabamelwane abakufutshane kumgama othile, ukuthula kunye nendalo yeyona nto ndifuna ukuyiqaqambisa njengeyona ibalulekileyo. Apha ungonwaba, uhleke, udanise kwaye uve umculo ongxolayo ngaphandle kokuphazamisa abanye, kodwa usenokukhetha ukonwabela uxolo, ukumamela ezakho iingcinga kwaye ungene kwincwadi entle. Ungabhala eyakho nawe apha.
Umbuki zindwendwe ngu- Merete
Ekubeni ndisebenza yonke imihla, kodwa ndihlala kufutshane, ndiya kuba lula ukuqhagamshelwa kwaye mhlawumbi. kwakhona yiza xa kuyimfuneko.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Næstved